ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး အစိမ်းသေခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ ချစ်သူစုံတွဲ (နှလုံးရောဂါရှိပါက မဖတ်ရ) - Padaethar
ကျွန်တော် တို့ အိမ်မှာ ဆွေရိပ် မျိုးရိပ်မကင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ကို အမေ က အိမ်မှာ ခေါ်ခိုင်းတယ်ဗျာ အဲ့ အေ ဒ်ါကြီးက သန်လျှင် နတ်စင်တစ်ရာဘက်ကနေ အလုပ်လာလုပ်တာ။
ကျွန်တော် ထင်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လလောက်ဖြစ်မယ် အဲ့နေ့က ကျွန်တော် က အိမ်အောက်ထပ် ဆင်းပြီး ဂျာနယ်ဖတ်ေ နတုန်း သူက ကျွန်တော့်ကို စကားလာပြောတယ် …
(ကျွန်တော် သရဲ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကို အဲ့အဒေါ်ကြီး ကသိ တယ်လေ) “သား ညတုန်းက ဒေါ်ကြီးတို့နားမှာ ည ၁၁ နာရီကျော်လောက်ကြီး ကားတိုက်မှုဖြစ်တယ် သားရေ။
ဒေါ်ကြီးတို့ အိပ်ခါနီး ဒုန်းးးးးးးးးးးးး ဆိုပြီး အသံကြားလိုက်တယ် အဲ့ဒါနဲ့ ဒေါ်ကြီးနဲ့ မင်း ကိုကြီး က ဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီး လမ်းထိပ်ထွက်ကြည့်တော့ ဒေါ်ကြီးတို့ လမ်းထိပ်နား ရောက်ခါနီးမှာ ….
ကားတစ်စီးက မောင်းပြေးသွားတဲ့ အသံကြားလိုက်တယ် ….လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကြည့်လိုက်တော့ မောင်းပြေးသွားတာက Taxi ဖြစ်နေတယ်။အတိုက်ခံလိုက်ရတာက ဆိုင်ကယ် ….
မြင်လို့တောင် မကောင်းဘူး သားရယ် ဆိုင်ကယ် က စုတ်ပြတ်သတ်သွားတာပဲ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က လမ်းပေါ်မှာ မှောက်ရက်ကြီး လဲနေတယ် ပွဲချင်းပြီး ဆုံးသွားတယ်….
ဦးဏှောက်တောင် ပွင့်ထွက်နေတယ်။ ကောင်လေး က ဆိုင်ကယ် နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ….ဒါပေမယ့် သူ့အောက်ပိုင်းက အရိုးတွေ ကျိုးတာမြင်တောင် မကောင်းတော့ဘူး ….သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ အော်နေတယ်သားရေ”
ကျွန်တော် ကတောင် “သေချာတယ် ဒေါ်ကြီး ရေ အဲ့ဒါ ဒေါ်ကြီး တို့ကို ခြောက်တော့မယ် ကောင်မလေး က အစိမ်းသေသွားတာဆိုတော့” နောက်ပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်။
“အာ… သားက လဲ ဒီနေ့ ညနေတောင် ပြန်ရမှာ ကြောက်နေပါတယ်ဆိုမှပဲ” ဆိုပြီး ပြောပြီး မီးဖိုချောင်မှာ ဟင်းသွားချ က်လေရဲ့။ကျွန်တော် ကတော့ ရီပြီး ကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်တော်လဲ မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက်ပဲပေါ့ အဲ့လိုနဲ့ ၁ လ ၂ လ လောက်လဲ နေကော အဲ့အဒေါ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို လာပြောပြပြန်တယ်။ “သားရေ ဟို သရဲမ ကတော့ သောင်ကျန်းနေပြီ”
“အာာာာာာာာာာ ဟိုတစ်ခါ တုန်းက ပြောပြတဲ့ ဆိုင်ကယ် မှောက်လို့ ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး လေ အခု အသေခြောက်နေပြီသားရေ”
“ဒေါ်ကြီးတို့ လမ်းထိပ်နားမှာ တိုက်ပျက်ကြီး တစ်ခု ရှိတယ်လေ ….အဲ့တိုက်က အရင်ထဲက သရဲေ ခြောက်တယ်ဆိုပြီး နာမည် ကြီးတယ်လေ သားကို ပြောဖူးပါတယ် ….
အဲ့တိုက်က အစတုန်းကတော့ ကုလားအဖိုးကြီး လင်မယား နှစ်ယောက် နေတာလေ သူတို့ ဆုံးသွားတော့ အခု ကုလားတွေက အဲ့တိုက်ကို နွားတွေထားဖို့ဆိုပြီး လုပ်ထားတာလေ။
အစတုန်းကတော့ လမ်း ထဲက လူတွေက ညဘက် အဲ့တိုက်ပျက်နားက ပြန်လာရင် အဲ့တိုက်ပျက်ထဲကို မိန်းမတစ်ယောက် ၀င်သွားတာမျိုးတွေ့လိုက်တယ်လို့ ပြောတာတော့ ကြားမိသား ….
ဒါပေမယ့် ကိုမြင်ရတာ မဟုတ်တော့ ဒေါ်ကြီးလဲကြောက်တော့ မကြောက်ဘူးပေါ့ကွယ်၊ အခုက သားရေ မနေ့ညတုန်းက ဒေါ်ကြီး က ၁၀ ခွဲလောက်ကြီး မင်းကိုကြီး …..
အလုပ်က ပြန်မလာသေးတာနဲ့ လမ်းထိပ်နားလေး ထွက်စောင့်နေတာ အဲ့ဆိုင်ကယ်မှောက် တဲ့နားလေး အဲ့တိုက်ပျက်ကြီးနဲ့ မျက်စောင်းထိုးလှမ်းလှမ်းနားလောက်မှာ အပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိတယ် …
အဲ့အပင်အောက်က အုတ်ခုံလေးမှာ ထိုင်စောင့်နေတာ။အစကတော့ မကြောက်ပါဘူး ဒီအတိုင်းပါပဲ ….ဒါပေမယ့် တိုက်ပျက်ကြီးနားလဲ ကြည့်လိုက်တော့ အမလေး သားရေ ….
မိန်းမ တစ်ယောက် ဆံပင်ဖားလျားချပြီး တိုက်ပျက်ကြီးထဲကို ၀င်သွားတယ် အမလေး ပြောရင်းနဲ့တောင် ကြက်သီးထတယ်”
ကျွန်တော် က “အော် ဟိုတလောက ဆိုင်ကယ် အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်လို့ သေသွားတယ်ဆိုတာလား ၊ ဘာလို့ အဲ့ သေသွားတဲ့ မိန်းကလေး လို့ တန်းသိနေရတာတုန်းဗျ”
“အာ သားကလဲ အဲ့ ကောင်မလေး သေတဲ့ ညတုန်းက သူက အကျီ အမည်း ထမိန် အမည်းရောင် ၀တ်ထားတာလေ ဆံပင်ကလဲ တင်ပါးလောက်ရှိတယ် ….
အဲ့နေ့ည က ပုံကို အခုထိတောင် မျက်စိထဲက မထွက်သေးပါဘူး ….အခုလဲ မြင်လိုက် ရတာ အဲ့နေ့ညတုန်းက အတိုင်းပဲ ဒေါ်ကြီးလဲ အဲ့တော့မှ ကြောက်လာတာနဲ့ မင်းကိုကြီးကိုတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူး အိမ်ကို တန်းပြေးတော့တာပဲ သားရေ”
“သတိထားပေါ့ ဒေါ်ကြီး ရယ် ကျွန်တော်ပြောသားပဲ ခြောက်တာကတော့ ခြောက်မှာပါလို့ သူတို့က အစိမ်းသေပဲ အမျှလေးဘာလေး ဝေလိုက်ပါလား”
“သားရယ် တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတဲ့ ဘ၀တွေဟာ ဘယ်လိုလုပ် အလှူပေး အမျှဝေ နိုင်မှာလဲ သားရေ အခုတော့ ဒေါ်ကြီး တို့ ရပ်ကွက်မှာ ည ၆ နာရီကျော်ရင် တစ်ယောက်ထဲတောင် အပြင်သိပ်မထွက်ကြတော့ဘူး …
၃ ၄ ယောက်စုပြီး ထွက်နေကြရတယ် တိုက်ပျက်ကြီးက ကုလားအဖိုးကြီးကလဲ ကြောက်ရ အခု ဒီ သရဲမ ကိုလဲ ကြောက်ရနဲ့ စိတ်ညစ်ပါတ ယ်ဟယ်”
နောက်ပိုင်းကြတော့ ကျွန်တော် လဲ မနက်ဆို ကျောင်းသွား အားတဲ့ရက်ဆို သင်တန်းသွားရ ပြန်လာရင် ညနေ ၆ နာရီေ လာက်ဖြစ်နေတော့ အဒေါ်ကြီး နဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာများတာပေါ့ဗျာ ….
တွေ့ဖြစ်ရင်လဲ ကျွန်တော်ကလဲ မမေးဖြစ်ဘူး …အဲ့ဒါနဲ့ သူကလဲ ဘာမှ လာမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ တနေ့က မနက်ဘက် သင်တန်းမရှိတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အိမ်အောက်ထပ်မှာ …
အင်တာနက် ဂျာနယ်ေ လး ဖတ်နေတုန်း အဒေါ်ကြီး “သား ဟိုးတလောတုန်းက သားကို ပြောဖူးတယ်မလား ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး သေသွား တာဆိုတာလေ”
“ဟမ် ဘယ်က စုံတွဲ တုန်း အဲ့တုန်းက ကောင်မလေးပဲ ရှောသွားတာဆို”
“ဟုတ်တယ်သားရေ နောက်တော့ ကောင်လေး ပါ ဆုံးသွားတယ်တဲ့ အခုချိန်ထိတောင် အဲ့ဆိုင်ကယ်ကို လာလဲ ပြန်မယူတော့ပဲ တိုက်ပျက်နားမှာ ထားထားတယ် ….
သင်္ကြန်တုန်းကတော့ ပရိတ်ရွှတ်တာပဲ အဲ့တုန်းက ကျွတ်သွားပြီထင်တာ အခုထိ မကျွတ်သေးဘူး ….အခုဆို ပိုတောင် ဆိုးလာပြီသားရေ”
“တနေ့ညတုန်းက အိမ်နားမှာ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆွဲတဲ့ ဦးချိုတူး(အမည်လွဲ)ဆိုတာ ရှိတယ်သားရေ သူက တနေ့ညတု န်းက ၁ နာရီလောက်မှ အောင်ချမ်းသာ ဘက်ကနေ ပြန်လာတာ …
အဲ့တာ ဒေါ်ကြီးတို့လမ်းထိပ်လဲ ရောက်ကော သူက လမ်းထဲကို ကွေ့တောမယ် အလုပ်မှာ ရုတ်တရက် ကြက်သီးထလာပြီး သူ့ ကျောကို ဗြောင်းဆိုပြီး လက်ဝါးနဲ့ ချလိုက် သလို ခံစားရပြီး။
ကျောတောင် အောင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ် ပြီးတေ့ ဆိုင်ကယ် လဲ လဲ မလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူက ဆိုင်က ယ် ကယ်ရီဆွဲတာလဲ ကြာနေပြဆိုတော့ ဆိုင်ကယ် မောင်းတော့ ကျွမ်းတာပေါ့ ….
အဲ့တာနဲ့ မှောက်မလိုဖြစ်တာကို ပြန်တည့်လိုက်ပြီး လီဗာကို နင်းလိုက်တော့ သူ့ဆိုင်ကယ်က ရွေ့တာ နဲနဲ နှေးသလိုဖြစ်နေလို့ နောက်လဲ လှည့်ကြည့်လိုက်ကော ….
ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က သူ့ဆိုင်ကယ်ကို ဆွဲထားတယ်တဲ့ သားရေ ….အဲ့တော့မှ သူလဲ ဆိုင်ကယ် အက်ဆီဒင့် ကြောင့် သေသွားတယ်။
ဟိုနှစ်ယောက်ကို သတိရသွားပြီး လီဗာကို စွတ်နင်းတာ အဲ့တော့မှ ဆိုင်ကယ် က ၀ူးးးးးးးးးးးးးးးကနဲ ထွက်သွားပြီး လီဗာကို စွတ်နင်းလိုက်တဲ့ အရှိန် ရယ် လူကလဲ ကြောက်နေတော့ အဲ့တော့မှ ဆိုင်ကယ် မှောက်တာ လက်တွေကော ဒူးတွေကော ပြဲတာ အများကြီးပဲ။
လူလဲ အခုမနက်လဲကျကော ဖျားနေပြီသားရေ၊ အခုဆို ညဘက် သိပ်မထွက်ရဲကြတော့ဘူး ၊ ပြီးတော့ ညဘက် ဖြတ် သွားဖြတ်လာရှိတဲ့ ….ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတွေပြောတာကလဲ ညည ဆို အဲ့တိုက်ပျက်ထဲကနေ ….
ကောင် မလေး တစ်ေ ယာက်က ထွက်လာတာကို ဖြတ်သွားရင် ဖြတ်ခနဲ ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရတယ် ပြောတယ်” အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က “ဇာတ်လမ်းက အခုမှ စတာ ဒေါ်ကြီး ရေ နောက်နေ့ တခြားလူတွေ အခြောက်ခံရရင် ထပ်ပြောပြအုန်း”
“အေး အေး သား ထပ်ထူးခြားရင် ဒေါ်ကြီး သားကိုပြောပြမယ်” ဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ထဲဝင်သွားလေရဲ့……။New Myanmar News
ကြှနျတျော တို့ အိမျမှာ ဆှရေိပျ မြိုးရိပျမကငျးတဲ့ အဒျေါကွီးတဈယောကျကို အမေ က အိမျမှာ ချေါခိုငျးတယျဗြာ အဲ့ အေ ဒျါကွီးက သနျလြှငျ နတျစငျတဈရာဘကျကနေ အလုပျလာလုပျတာ။
ကြှနျတျော ထငျတယျ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ လလောကျဖွဈမယျ အဲ့နကေ့ ကြှနျတျော က အိမျအောကျထပျ ဆငျးပွီး ဂြာနယျဖတျေ နတုနျး သူက ကြှနျတေျာ့ကို စကားလာပွောတယျ …
(ကြှနျတျော သရဲ အကွောငျး စိတျဝငျစားတယျဆိုတာကို အဲ့အဒျေါကွီး ကသိ တယျလေ) “သား ညတုနျးက ဒျေါကွီးတို့နားမှာ ည ၁၁ နာရီကြျောလောကျကွီး ကားတိုကျမှုဖွဈတယျ သားရေ။
ဒျေါကွီးတို့ အိပျခါနီး ဒုနျးးးးးးးးးးးးး ဆိုပွီး အသံကွားလိုကျတယျ အဲ့ဒါနဲ့ ဒျေါကွီးနဲ့ မငျး ကိုကွီး က ဘာမြားဖွဈလဲဆိုပွီး လမျးထိပျထှကျကွညျ့တော့ ဒျေါကွီးတို့ လမျးထိပျနား ရောကျခါနီးမှာ ….
ကားတဈစီးက မောငျးပွေးသှားတဲ့ အသံကွားလိုကျတယျ ….လမျးထိပျရောကျတော့ ကွညျ့လိုကျတော့ မောငျးပွေးသှားတာက Taxi ဖွဈနတေယျ။အတိုကျခံလိုကျရတာက ဆိုငျကယျ ….
မွငျလို့တောငျ မကောငျးဘူး သားရယျ ဆိုငျကယျ က စုတျပွတျသတျသှားတာပဲ။ ကောငျမလေးတဈယောကျက လမျးပျေါမှာ မှောကျရကျကွီး လဲနတေယျ ပှဲခငျြးပွီး ဆုံးသှားတယျ….
ဦးဏှောကျတောငျ ပှငျ့ထှကျနတေယျ။ ကောငျလေး က ဆိုငျကယျ နဲ့ အဝေးကွီးမှာ ….ဒါပမေယျ့ သူ့အောကျပိုငျးက အရိုးတှေ ကြိုးတာမွငျတောငျ မကောငျးတော့ဘူး ….သှေးရူးသှေးတနျးနဲ့ အျောနတေယျသားရေ”
ကြှနျတျော ကတောငျ “သခြောတယျ ဒျေါကွီး ရေ အဲ့ဒါ ဒျေါကွီး တို့ကို ခွောကျတော့မယျ ကောငျမလေး က အစိမျးသသှေားတာဆိုတော့” နောကျပွီး ပွောလိုကျသေးတယျ။
“အာ… သားက လဲ ဒီနေ့ ညနတေောငျ ပွနျရမှာ ကွောကျနပေါတယျဆိုမှပဲ” ဆိုပွီး ပွောပွီး မီးဖိုခြောငျမှာ ဟငျးသှားခြ ကျလရေဲ့။ကြှနျတျော ကတော့ ရီပွီး ကနျြခဲ့တာပေါ့။
ကြှနျတျောလဲ မမေ့ေ့ ပြောကျပြောကျပဲပေါ့ အဲ့လိုနဲ့ ၁ လ ၂ လ လောကျလဲ နကေော အဲ့အဒျေါကွီးက ကြှနျတေျာ့ကို လာပွောပွပွနျတယျ။ “သားရေ ဟို သရဲမ ကတော့ သောငျကနျြးနပွေီ”
“အစ မရှိ အဆုံး မရှိနဲ့ ဘယျက သရဲမတုနျးဗြ”
“အာာာာာာာာာာ ဟိုတဈခါ တုနျးက ပွောပွတဲ့ ဆိုငျကယျ မှောကျလို့ ဆုံးသှားတယျဆိုတဲ့ ကောငျမလေး လေ အခု အသခွေောကျနပွေီသားရေ”
“ဒျေါကွီးတို့ လမျးထိပျနားမှာ တိုကျပကျြကွီး တဈခု ရှိတယျလေ ….အဲ့တိုကျက အရငျထဲက သရဲေ ခွောကျတယျဆိုပွီး နာမညျ ကွီးတယျလေ သားကို ပွောဖူးပါတယျ ….
အဲ့တိုကျက အစတုနျးကတော့ ကုလားအဖိုးကွီး လငျမယား နှဈယောကျ နတောလေ သူတို့ ဆုံးသှားတော့ အခု ကုလားတှကေ အဲ့တိုကျကို နှားတှထေားဖို့ဆိုပွီး လုပျထားတာလေ။
အစတုနျးကတော့ လမျး ထဲက လူတှကေ ညဘကျ အဲ့တိုကျပကျြနားက ပွနျလာရငျ အဲ့တိုကျပကျြထဲကို မိနျးမတဈယောကျ ဝငျသှားတာမြိုးတှလေို့ကျတယျလို့ ပွောတာတော့ ကွားမိသား ….
ဒါပမေယျ့ ကိုမွငျရတာ မဟုတျတော့ ဒျေါကွီးလဲကွောကျတော့ မကွောကျဘူးပေါ့ကှယျ၊ အခုက သားရေ မနညေ့တုနျးက ဒျေါကွီး က ၁၀ ခှဲလောကျကွီး မငျးကိုကွီး …..
အလုပျက ပွနျမလာသေးတာနဲ့ လမျးထိပျနားလေး ထှကျစောငျ့နတော အဲ့ဆိုငျကယျမှောကျ တဲ့နားလေး အဲ့တိုကျပကျြကွီးနဲ့ မကျြစောငျးထိုးလှမျးလှမျးနားလောကျမှာ အပငျကွီး တဈပငျရှိတယျ …
အဲ့အပငျအောကျက အုတျခုံလေးမှာ ထိုငျစောငျ့နတော။အစကတော့ မကွောကျပါဘူး ဒီအတိုငျးပါပဲ ….ဒါပမေယျ့ တိုကျပကျြကွီးနားလဲ ကွညျ့လိုကျတော့ အမလေး သားရေ ….
မိနျးမ တဈယောကျ ဆံပငျဖားလြားခပြွီး တိုကျပကျြကွီးထဲကို ဝငျသှားတယျ အမလေး ပွောရငျးနဲ့တောငျ ကွကျသီးထတယျ”
ကြှနျတျော က “အျော ဟိုတလောက ဆိုငျကယျ အကျဆီးဒငျ့ဖွဈလို့ သသှေားတယျဆိုတာလား ၊ ဘာလို့ အဲ့ သသှေားတဲ့ မိနျးကလေး လို့ တနျးသိနရေတာတုနျးဗြ”
“အာ သားကလဲ အဲ့ ကောငျမလေး သတေဲ့ ညတုနျးက သူက အကြီ အမညျး ထမိနျ အမညျးရောငျ ဝတျထားတာလေ ဆံပငျကလဲ တငျပါးလောကျရှိတယျ ….
အဲ့နညေ့ က ပုံကို အခုထိတောငျ မကျြစိထဲက မထှကျသေးပါဘူး ….အခုလဲ မွငျလိုကျ ရတာ အဲ့နညေ့တုနျးက အတိုငျးပဲ ဒျေါကွီးလဲ အဲ့တော့မှ ကွောကျလာတာနဲ့ မငျးကိုကွီးကိုတောငျ မစောငျ့နိုငျတော့ဘူး အိမျကို တနျးပွေးတော့တာပဲ သားရေ”
“သတိထားပေါ့ ဒျေါကွီး ရယျ ကြှနျတျောပွောသားပဲ ခွောကျတာကတော့ ခွောကျမှာပါလို့ သူတို့က အစိမျးသပေဲ အမြှလေးဘာလေး ဝလေိုကျပါလား”
“သားရယျ တနလေု့ပျမှ တနစေ့ားရတဲ့ ဘဝတှဟော ဘယျလိုလုပျ အလှူပေး အမြှဝေ နိုငျမှာလဲ သားရေ အခုတော့ ဒျေါကွီး တို့ ရပျကှကျမှာ ည ၆ နာရီကြျောရငျ တဈယောကျထဲတောငျ အပွငျသိပျမထှကျကွတော့ဘူး …
၃ ၄ ယောကျစုပွီး ထှကျနကွေရတယျ တိုကျပကျြကွီးက ကုလားအဖိုးကွီးကလဲ ကွောကျရ အခု ဒီ သရဲမ ကိုလဲ ကွောကျရနဲ့ စိတျညဈပါတ ယျဟယျ”
နောကျပိုငျးကွတော့ ကြှနျတျော လဲ မနကျဆို ကြောငျးသှား အားတဲ့ရကျဆို သငျတနျးသှားရ ပွနျလာရငျ ညနေ ၆ နာရီေ လာကျဖွဈနတေော့ အဒျေါကွီး နဲ့ မတှဖွေ့ဈတာမြားတာပေါ့ဗြာ ….
တှဖွေ့ဈရငျလဲ ကြှနျတျောကလဲ မမေးဖွဈဘူး …အဲ့ဒါနဲ့ သူကလဲ ဘာမှ လာမပွောတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ တနကေ့ မနကျဘကျ သငျတနျးမရှိတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အိမျအောကျထပျမှာ …
အငျတာနကျ ဂြာနယျေ လး ဖတျနတေုနျး အဒျေါကွီး “သား ဟိုးတလောတုနျးက သားကို ပွောဖူးတယျမလား ဆိုငျကယျမှောကျပွီး သသှေား တာဆိုတာလေ”
“အငျး မှတျမိတယျလေ ဘာဖွဈလို့တုနျး”
“အဲ့ စုံတှဲ အခုထိ ခွောကျနသေေးလို့သားရေ”
“ဟမျ ဘယျက စုံတှဲ တုနျး အဲ့တုနျးက ကောငျမလေးပဲ ရှောသှားတာဆို”
“ဟုတျတယျသားရေ နောကျတော့ ကောငျလေး ပါ ဆုံးသှားတယျတဲ့ အခုခြိနျထိတောငျ အဲ့ဆိုငျကယျကို လာလဲ ပွနျမယူတော့ပဲ တိုကျပကျြနားမှာ ထားထားတယျ ….
သင်ျကွနျတုနျးကတော့ ပရိတျရှတျတာပဲ အဲ့တုနျးက ကြှတျသှားပွီထငျတာ အခုထိ မကြှတျသေးဘူး ….အခုဆို ပိုတောငျ ဆိုးလာပွီသားရေ”
“တနညေ့တုနျးက အိမျနားမှာ ဆိုငျကယျ ကယျရီဆှဲတဲ့ ဦးခြိုတူး(အမညျလှဲ)ဆိုတာ ရှိတယျသားရေ သူက တနညေ့တု နျးက ၁ နာရီလောကျမှ အောငျခမျြးသာ ဘကျကနေ ပွနျလာတာ …
အဲ့တာ ဒျေါကွီးတို့လမျးထိပျလဲ ရောကျကော သူက လမျးထဲကို ကှတေ့ောမယျ အလုပျမှာ ရုတျတရကျ ကွကျသီးထလာပွီး သူ့ ကြောကို ဗွောငျးဆိုပွီး လကျဝါးနဲ့ ခလြိုကျ သလို ခံစားရပွီး။
ကြောတောငျ အောငျ့သှားတယျလို့ပွောတယျ ပွီးတေ့ ဆိုငျကယျ လဲ လဲ မလိုဖွဈသှားတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ သူက ဆိုငျက ယျ ကယျရီဆှဲတာလဲ ကွာနပွေဆိုတော့ ဆိုငျကယျ မောငျးတော့ ကြှမျးတာပေါ့ ….
အဲ့တာနဲ့ မှောကျမလိုဖွဈတာကို ပွနျတညျ့လိုကျပွီး လီဗာကို နငျးလိုကျတော့ သူ့ဆိုငျကယျက ရှတေ့ာ နဲနဲ နှေးသလိုဖွဈနလေို့ နောကျလဲ လှညျ့ကွညျ့လိုကျကော ….
ဘယျကနေ ဘယျလိုရောကျလာမှနျးမသိတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျက သူ့ဆိုငျကယျကို ဆှဲထားတယျတဲ့ သားရေ ….အဲ့တော့မှ သူလဲ ဆိုငျကယျ အကျဆီဒငျ့ ကွောငျ့ သသှေားတယျ။
ဟိုနှဈယောကျကို သတိရသှားပွီး လီဗာကို စှတျနငျးတာ အဲ့တော့မှ ဆိုငျကယျ က ဝူးးးးးးးးးးးးးးးကနဲ ထှကျသှားပွီး လီဗာကို စှတျနငျးလိုကျတဲ့ အရှိနျ ရယျ လူကလဲ ကွောကျနတေော့ အဲ့တော့မှ ဆိုငျကယျ မှောကျတာ လကျတှကေော ဒူးတှကေော ပွဲတာ အမြားကွီးပဲ။
လူလဲ အခုမနကျလဲကကြော ဖြားနပွေီသားရေ၊ အခုဆို ညဘကျ သိပျမထှကျရဲကွတော့ဘူး ၊ ပွီးတော့ ညဘကျ ဖွတျ သှားဖွတျလာရှိတဲ့ ….ဆိုငျကယျ ကယျရီသမားတှပွေောတာကလဲ ညည ဆို အဲ့တိုကျပကျြထဲကနေ ….
ကောငျ မလေး တဈေ ယာကျက ထှကျလာတာကို ဖွတျသှားရငျ ဖွတျခနဲ ဖွတျခနဲ တှလေို့ကျရတယျ ပွောတယျ” အဲ့ဒါနဲ့ ကြှနျတျောက “ဇာတျလမျးက အခုမှ စတာ ဒျေါကွီး ရေ နောကျနေ့ တခွားလူတှေ အခွောကျခံရရငျ ထပျပွောပွအုနျး”
“အေး အေး သား ထပျထူးခွားရငျ ဒျေါကွီး သားကိုပွောပွမယျ” ဆိုပွီး မီးဖိုခြောငျထဲဝငျသှားလရေဲ့……။New Myanmar News
Categories ဖြစ်ရပ်မှန် Post navigation